Izindawo zokuhlala e- Wingertsglück - I-Airbnb
Izindawo zokuhlala e- Wingertsglück
Worms, Rheinland-Pfalz, i-Germany
U-Barbara uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Siyakwamukela efulethini lethu leholide lase-Wingertsglück. Kithina, igama lisho konke: Maphakathi nedolobha laseNibelunge laseWorms, phansi kweBandla LeNkosikazi Yethu, kukhona iValckenberg edumile, izithelo zayo zinikela ngeLiebfrauenmilch, iwayini elaziwa emhlabeni wonke. Ifulethi lethu likulesi sivini. Le ndawo yenza ifulethi lihluke. Isikhungo sedolobha sihamba imizuzu eyi-10-15, njengoba kunjalo neRhine, kodwa nokho uzungezwe izivini endaweni ethule.
Ifulethi lesimanje elinemishini liyasebenza. Indawo yokuhlala ihlukaniswe yaba yindawo yokudlela ethokomele enekhishi elifakiwe ohlangothini olulodwa nendawo yokulala enekhona le-TV nendawo yomlilo ngakolunye uhlangothi lwegumbi. Lapha unethuba lokusetha umbhede noma ukubeka phansi umatilasi, ngakho-ke ingane yakho yamukelekile kakhulu. Igumbi lokugezela elivulekile elinosinki ababili kanye nobhavu kanye negumbi lokuzilolonga elinomshini wokugwedla kanye ne-treadmill kuqedela okunikezwayo. Ithala elincane liholela engadini yethu, ongayisebenzisa, ngokuhlela, ukuze uthole ubusuku obupholile bezoso. Ithala ungalisebenzisa mahhala.
Ingabe unazo izicelo, imibuzo noma ukhohlwe okuthile? Ungathanda ukonakala, udinga amathikithi noma ulwazi kusenesikhathi? Ngiyajabula ukusiza. Ungangithola kuwebhusayithi yami kokuthi wingertsglueck.com.
Hlola ezinye izinketho ezise- Worms namaphethelo